Amin'ny fanahy mivavaka
“Ampahirato ny masoko, mba hahitako zava-mahagaga ao amin’ny lalànao” Sal. 119:18
Betsaka ny teny ao amin’ny Soratra Masina izay lazain'ny manam-pahaizana ho zava-miafina na dia dinganiny ho tsy misy lanjany firy no feno fampiononana sy toro-hevitra ho an’izay efa nampianarina tao amin’ny sekolin’i Kristy. Iray amin’ny antony tsy ananan’ireo teôlôjianina fahalalana mazava kokoa ny Tenin’Andriamanitra , dia satria manakimpy ny masony amin’ireo fahamarinana izay tsy tian’izy ireo hampiharina. Ny fahalalana ny fahamarinana ao amin’ny baiboly dia tsy miankina manontolo amin’ny herin’ny fahaizana entina mandinika ho toy fomba tokana rehefa mikatsaka marina ny fahamarinana.
Tsy tokony hianarana na oviana na oviana tsy amim-bavaka ny baiboly. Ny Fanahy Masina irery ihany no afaka manampy antsika hahatsapa ny maha-zava-dehibe ireo zavatra mora takarina ireo na miaro antsika hiatrika fahasarotana amin’ny fahazoana ny fahamarinana. Fanampian’ny anjelin’ny lanitra no manomana ny fo amin’izany, mba hahalala Tenin’Andriamanitra izay hanaitra antsika noho ny fahatsarany, ho taitra amin’ny fampitandremana omeny, na hentanina sy hampaherezin’ireo teny fikasany. Tokony hataontsika ny fangatahana nataon’ny mpanao Salamo: “Ampahirato ny masoko, mba hahitako zava-mahagaga ao amin’ny lalànao”.
Miseho ho tsy voatohitra matetika ny fakam-panahy, satria rehefa atao an-tsirambina ny vavaka sy ny fianarana ny baiboly dia tsy afaka ny hahatsiaro avy hatrany ireo teny fikasan’Andriamanitra sy hifanehitra amin’i Satana miaraka amin’ny Sabatry ny Soratra Masina ilay alaim-panahy. Fa manodidina ireo izay maniry hianatra ny zavatry ny lanitra ireo anjely; ary amin’ny fotoana tena ilaina iny indrindra dia hitondra fahamarinana ilainy ao amin’ny fitadidiany izy ireo. “Fa raha avy toy ny ony ny fahavalo, ny Fanahin’i Jehovah hanangana faneva hisakana azy” Isa. 59:19
Nanome teny fikasana ny mpianatra i Jesosy nanao hoe: “ Fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny Anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo” Jao. 14:26. Fa tsy maintsy tahirizina mialoha ao an-tsaina aloha ny fampianaran’i Kristy mba hahafahan’ny Fanahin’Andriamanitra mampahatsiahy antsika amin’ny andro mahory. “Ato am-poko no iraketako ny teninao”, hoy i Davida, “mba tsy hanotako aminao” Sal. 119:11.-HM,tt. 625-626.